Nhau - Kugadzirwa kwezvakatipoteredza
Kambani yedu inonamatira kune pfungwa yehukama hwezvakatipoteredza uye kuchengetedza zviwanikwa. Munguva pfupi yapfuura mamiriro ekuchengetedza ezvemamiriro ekunze haana kunaka, kambani yedu inopindura zvakanaka uye inoita kugadzirwa kwezvakatipoteredza.
1. Bvisa zvivakwa zvisingachashandi uye suma zvigadzirwa zvemberi. Isu tinobvisa zvivakwa zvisingachashandi uye nekuunza zvigadzirwa zvemberi panguva yakatarwa yekuvandudza mashandiro ekugadzira, zvichideredza chiyero chemarara panguva imwechete kuziva zero kusvibiswa uye micro emission mukugadzirwa.
2. Gadzirira zvinhu kusangana nezuva rakabvumiranwa rekuendesa nevatengi zvinoshingairira. Gadzirira zvinhu zvisati zvaitika kuitira odha dzese kuti uve nechokwadi chekuti zvinhu zvinogona kuwanikwa kubva kune vanotengesa zvinhu nenguva yekuenderera mberi nekugadzirisa uye kuungana, kuitira kuve nechokwadi chekuendeswa kwezvinhu kune vatengi nenguva.